Qaybaha ku jira Actualidad Gadget
War gadget ujeedadeedu tahay inay bixiso goob kulan oo loogu talagalay dhammaan kuwa jecel qalabka, xisaabinta iyo tignoolajiyada guud ahaan. Mahadsanid kooxdayada tafatiraha khabiir waxaan awood u leenahay inaan soo bandhigno waxyaabo tayo sare leh oo leh qalafsanaanta ugu badan ee loo baahan yahay, taas oo ah aad ayey u qadariyeen bulshadeena akhristayaasha ah waana qodob muhiim ah oo inaga soocaya tartankeena.
Waxaan soo saareynay waxyaabaha ku jira degelkan ilaa 2005, sidaa darteed waxaan la macaamilnay mowduucyo aad u kala duwan. Si ay kuugu fududaato helitaanka macluumaadka aad raadineyso, hoosta waxaan ku soo bandhigeynaa liiska mowduucyada shabakadeena lagu abaabulay.
Filimaan iyo taxane
Wasmo iyo wasmo